Kulanka wadatashiga shacabka iyo xukuumada ee qorfaynta qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga oo galay maalintii 3aad iyo Wajigii 2aad ee GTP2. - Cakaara News
Kulanka wadatashiga shacabka iyo xukuumada ee qorfaynta qorshaha koboca dhaqaalaha iyo isbadalka 2aad ee GTP2ga oo galay maalintii 3aad iyo Wajigii 2aad ee GTP2.
Jigjiga(CN) Arbaco July-23-2015. Waxaa maalintii 3aad galay kulan waynihii wada tashiga shacabka iyo xukuumada DDSI ee lagu gorfaynayay jihooyinka iyo istaraatajiyadaha qorshaha Isbedelka koboca dhaqaalaha ee shanta sano ee soo socda GTP2ga iyadoona si faahfaahsan looga wada munaaqashooday sida uu u fulay GTP1 iyo caqabadihii lagala kulmayba si wajiga 2aad ee GTP2 looga gaashaanto sidii loogu talogalyna loo dhaqaangaliyo.
Wuxuuna,kulankani galay maanta wajigii 2aad waxaana, 2dii maalmood ee hore ay masuuliyiinta xukuumada DDSI ugu saraysa iyo masuuliyiinta faderaalku la kulmeen haweenka iyo odayaasha, maanta waligan 2aad waxaa kala kulmay maalqabeenada ganacsatada iyo dhalinyarada taasi oo ka dhigan in qorshahana ay wadaagayaan dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada DDSI iyada oo uu hadhsan yahay wajigii 3aad ee kulan waynahan oo ah ka kulanka aqoon yahayka DDSI.
Kulanka shalay ayaa waxaa sidii awal horeba ka kala socday hoolalka shirarka ee qaryaan dhoodaan iyo hoolka sayidka ay uga kala socdeen kuwaasi oo ay qaybta qaybta maal qabeenada ganacsatada hogaaminayeen madaxwaynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar iyo wasiirka wasaarada arimaha federaalka JDFI Dr sheferew tegle mariam.
Halka ay qabta dhalinyaradana hogaaminayeen afhayeenka golaha baarlamaanka DDSI mudane maxamed rashiid isaaq iyo wasiirku xigeenka wasaarada maaliyada iyo horumarinta dhaqaalaha JDFI mudane ahmed shide.